❀﻿ သင် နုပျိုအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ ❀﻿ - Lanthit
Home / Knowledge / ❀﻿ သင် နုပျိုအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ ❀﻿
❀﻿ သင် နုပျိုအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ ❀﻿
1. အရေးမပါတာ တွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ
အဲဒီ အရေးမပါတာ တွေဆိုတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အသက်ရယ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ရယ်၊ အရပ်အမြင့် ရယ်လည်းပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ရှိတာပဲ။ ဒီကိစ္စအတွက် ပူနေစရာ မလိုပါဘူးဗျာ။
2. ပျော်ပျော် နေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ပေါင်းပါ
တစ်ချိန်လုံး ညည်းညူနေခြင်းက သင့်ကို ဖျက်ဆီးနေရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ညည်းညူ နေတတ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီအချက်ကလေးကို သတိရလိုက်ပါနော်။
3. အမြဲတမ်း သင်ယူလေ့လာနေပါ
ကွန်ပျူတာ အကြောင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း အကြောင်း၊ လက်မှုပညာ အကြောင်း၊ ဘာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်ယူလေ့လာနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို ဘယ်တော့မှ အနားမပေးပါနဲ့။ စကားပုံတောင် ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား.. ဘာတဲ့ An idle mind is the devil's workshop တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ကတော့ The devil's name is Alzheimer's! ပဲပေါ့
4. ရိုးရိုးလေးတွေနဲ့ပဲ နေတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ
အကြာကြီး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကို ရယ်မော ပစ်လိုက်ပါ။ ရယ်လွန်းလို့ ပင့်သက်ရှိုက်ရတဲ့ အထိကိုပေါ့။ သင့်မှာ သင့်ကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်သာ ရှိမယ် ဆိုရင် သူနဲ့ပဲ အချိန်ဖြုန်း နေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
6. သင်ချစ်တတ်တဲ့ အရာတွေ သင့်အနားမှာ ရှိနေပါစေ
သင့်မိသားစု၊ သင်ချစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်၊ သင်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်၊ သင်နှစ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဒါတွေနဲ့အတူ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်နားခိုဖို့ နေရာတစ်နေရာလည်း ရှိနေရမယ်နော်။
7. မျက်ရည်ကျလောက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံလာခဲ့ရင် ကြံ့ကြံ့ခံပါ
၀မ်းနည်းပူဆွေး နေလိုက်ပါ၊ ပြီးရင်တော့ စိတ်ထဲကနေ ထုတ်လိုက်ပါတော့။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိနေမှာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလေ။ ဒီတော့ ကိုယ် အသက်ရှင်နေစဉ် အတွင်းမှာ ရှင်သန်အောင် နေထိုင်ပါ။
8. ကိုယ့်အသက်ကိုယ် တန်ဘိုးထား မြတ်နိုးပါ
ကျန်းမာရေး မကောင်းရင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရမှာပေါ့။ မကြာခဏ နေမကောင်း ဖြစ်နေရင်လည်း ပိုကောင်းအောင် လုပ်တတ်ရမယ်လေ။ အင်း.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုမှ မကယ်နိုင်တဲ့ အဆုံးတော့ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ အကူအညီကို ယူရတော့မှာပါပဲ။
9. မသွားချင်တဲ့ ခရီးတွေကို မသွားနဲ့လေ
မောလ်တွေကို ရှော့ပင်ထွက်ပါ။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို သွားလည်ပါ။ နောက်.. တစ်ခြားသော နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေထိတောင် ရှော့ပင် ထွက်လိုက်ပါအုံး။ ဒါပေမယ့်.. စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မဟုတ်တဲ့.. စနိုးစနောင့် ခရီးမျိုးတော့ မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။
10. ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေကို အသက်ရှင်နေတုန်း၊ အခွင့်အရေး ရတုန်းမှာ ချစ်တယ်လို့ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။
ဒီလို နုပျိုအောင် နေနည်းကို နောက်ထပ် လူတွေကိုလည်း မျှဝေပေးစေ ချင်တယ်လေ။ 10 ယောက်ဆီ မဟုတ်တောင် ကိုယ်ချစ်တဲ့၊ ကိုယ်ဂရုစိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက် လောက်ကိုပဲ ပြောပြလိုက်ပေါ့။
👧မိန်းမသားတို့အတွက် မင်္ဂလာဦးည ဆိုတာ💞
💓💓💓💓💓💓💓💓💑 မင်္ဂလာဦးည ဟာ အမိုက်ဆုံးည ဖြစ်နေရမယ်လေ သင့်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို စိတ်ကူး ယဉ်ဖူးပါသလား။ မင်္ဂလာဦးည ကို စိတ်ကူး မယဉ်ဖူးပါဘူးလ...
❤ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်မိသွားရင် ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဒီ(၉)ချက်ပါ❤
💓💓💓💓💓💓💓💓💑 ၁။ သူအနားမှာ ရှိနေရရင် ဘဝတစ်ခုလုံး ပြည့်စုံနေသလို အရမ်းပျော်နေမိတယ်။ ၂။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးအမွှား လေးတွေကအစ သေချာ ဂရ...
👦 ကောင်လေးတွေ သဝန်တိုလာရင် လုပ်တတ်တဲ့ အရာ(၆)ခု ➰
💓💓💓💓💓💓💓💓👦 ယောင်္ကျားလေးတွေ သဝန်တိုလာရင် မိန်းကလေးတွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောပြ တတ်တာကြောင့် ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေတတ်ပ...
ချစ်သူနဲ့နမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ် 😘
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိပါသလား။ နောက်ပြီး ချစ်သူကိုရော မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းခဲ့ဖူး ပါသလား။💏 ပြီးတော့ ချစ်သူကို နမ်းခြင်းဟာ က...
👧 မိန်းခ​လေးများ အသဲမကွဲ​အောင်​နေနည်း ✔😍
💓💓💓💓💓💓💓💓👧 ယောကျာ်း တစ်​​ယောက်​ကို အရမ်းချစ်​မိ​နေပြီဆိုရင်​ ဘယ်​​တော့မှ အပြင်​ထုက်​ပြပြီး မချစ်​နဲ့။ ရင်​ထဲမှာပဲ ထားပြီးချစ...
ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ဒီလိုလေး အချိန်ဖြုန်းပါ…💗
(1) သူ့ရဲ့လည်ပင်းလေးက်ို ရှေ့သွားလေးနဲ့ သာသာလေး ကိုက်ကြည့်ပါ။😁💓 (2) သူ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ မှီရင်း စကားလေးတွေ ပြောပါ။💑 ရံဖန်ရံခါ မကြာခဏ ဖ...
တနင်္ဂနွေ (ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှ အောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင် ချောနေ လန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြတတ်ဘူး… ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ခ...
❀﻿❀﻿ လက်တွဲဖော် ဆိုတာ ❀﻿❀
❀﻿❀﻿ လက်တွဲဖော် ဆိုတာ ❀﻿❀﻿ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ လက်တွဲဖော်ဆိုတာ အမြဲ အနိုင်ယူရမဲ့အရာမဟုတ်ဘူး•••• ♡ လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ...
💝 LDRS ချစ်သူတွေ အနားမှာရှိသလို ဂရုစိုက်​နိုင်​မယ့့်​ နည်းလမ်း​များ 💝
သင်​တို့ချစ်​သူနှစ်​ဦး LDRS ဖြစ်​​ပေမယ့့်​လည်း အနားမှာရှိသလို ဂရုစိုက်​နိုင်​မယ့့်​နည်းလမ်း​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်​ •••••••••••••••••...
ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းစေသောအချက်(၅)ချက်
ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းစေသောအကြောင်းအရာများ ၁/ အလေးထားမှု့ ကိုယ်တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါ အသေးမွှား ကိစ...